गगन थापाको प्रश्नः मन्त्रीजी सूचना प्रविधि विधेयककोबारेमा बहस माइतीघर मण्डलामा गर्ने हो कि तपाईंको पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
गगन थापाको प्रश्नः मन्त्रीजी सूचना प्रविधि विधेयककोबारेमा बहस माइतीघर मण्डलामा गर्ने हो कि तपाईंको पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा ?
प्रकाशित मिति : २०७६, २४ पुष बिहीबार १९:५७
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले काम गरेर जनताकोे मन जित्न नसकेपछि आलोचनाबाट जोगिन सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघले नागरिक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने विधेयकहरुविरुद्ध बिहीबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले कमजोर सरकारले कानून बनाएरै जनताको मुख थुन्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । उनले विधेयक नपढीकनै विरोध गरिएको भन्ने विभागीय मन्त्रीको भनाईप्रति आपत्ति जनाए ।
विधेयकका सबै दफा दफामा आफू छलफल गर्न तयार रहेको भन्दै उनले छलफल कहाँ गर्ने भनी प्रश्न गरे । उनले सूचनाको हकको अधिकार कुण्ठित गर्ने हो भने नेपालको संविधान क्यूवा र उत्तर कोरियाको संविधान भन्दा भिन्न नरहने बताए ।
उनले भने, “यो विधेयकको धारा धारामा दफा, दफामा छलफल गर्न तयार छौ । माननीय मन्त्री ज्यूले भन्नुभएछ, विधेयक नपढीकन आयो । यो विधेयकमा कहाँ छलफल गर्ने मन्त्री जी ? सिंहदरबार गर्ने हो ? संसदमा गर्ने हो ? माइतीघर मण्डलामा गर्ने हो ? कि तिम्रो कार्यालय धुम्बाराहीमा गर्ने हो ? प्रत्येक दफा दफामा , शब्द शब्दमा छलफल गर्न तयार छु । नपढीकन आएको होइन । पढेर, बुझेर आएको । हेप्ने हाम्लाई नपढीकन आयो भन्ने ?”
विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरेको बहानामा मस्यौदामा ‘निरन्तर’ भन्ने शब्द मात्रै थप्ने काम भएको तर्क उनले गरे । विरोधसभा अघि विद्यार्थीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने गरि विधेयक ल्याईएको भन्दै सूचना प्रविधि विधेयक खारेजीको माग गर्दे नाराबाजी सहित र्याली गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसले सूचना प्रविधि विधेयक लगायत विवादास्पद विधेयकहरु फिर्ता गर्न माग गर्दै आएको छ ।